Email your request with dedication to any person &amessage for him or her.
SPoT FM will play it for you & your dedicated person.
မင်းသိဖို့ကောင်းတယ် - မျိုးကြီး
ဒီရက်ပိုင်း သီချင်းသစ်တွေ တင်တာလည်းများပြီလေ.. ဒါနဲ့ သီချင်းဟောင်းလေးတင်မယ် စဉ်းစားတုန်း ဒီသီချင်းလေး နားထောင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ လွမ်းနေတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်အတွက်ပေါ့ဗျာ။ မျိုးကြီးရဲ့ မင်းသိဖို့ကောင်းတယ် သီချင်းလေးပေါ့။ နားထောင် လိုက်ပါဦး။
ကန်တော်ကြီး အင်းယားလည်း မသွားချင် ကိုယ်လေမသွားဘူး
နှစ်ယောက်သားသွားဘူးတဲ့ ဘုရားပေါ်မှာ ခိုလေးများ
ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း မသွားရဲဘူး အရင်လိုအင်အားမရှိ
သတိရလို့ ဆွေးရမယ့် ကိုယ့်အဖြစ်များ
အိပ်မက်လေးမက်ဖို့ ကြောက်မိတယ် ပြန်စဉ်းစား
ချိုသာတဲ့ စကားများ ပျောက်ကွယ်ရင် မနေတတ်လို့
Labels: Blues, MyoGyi, Rock
Broadcasted on 27 June, 2008 | 12:56 AM
လွမ်းလောက်လို့လား - 9mm
သူငယ်ချင်းနောက်တစ်ယောက်ကို မေးကြည့်တယ်... စိတ်ထဲမှာ အဖုအထစ်တစ်ခုရှိနေပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောချင်/ဖြစ်ရင် ဘယ်လို မြန်မာသီချင်းမျိုးနားထောင်လဲလို့။ သူကပြောတယ် Avril Lavinge ရဲ့ Nobody's Home ကတော့ အရမ်းထိတာပေါ့တဲ့။ မြန်မာသီချင်းပါဆိုမှလို့ပြောတော့ ဖြစ်ညှစ်ပြီး ဒီသီချင်းလေးကို ထုတ်ပြောရှာတယ်။ ကြက်ဖရဲ့ လွမ်းလောက်လို့လားတဲ့ဗျာ... နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦး
Yo, Check it! I'm gonna take this beatbox right here.
I'm gonna make this shit, Check it!
နင်တစ်ယောက်တည်း အခန်းတွေထဲမှာ မီးကိုပိတ် ဒီလိုနဲ့လွမ်းနေခဲ့တာ
လန်းဆန်းတဲ့မင်းဘ၀တောင် ဘာလိုလိုနဲ့ နွမ်းကြေခဲ့ရ
လူတကာနဲ့တွဲပြီး မင်းကို ညာနေလဲ မတင်းကြပ်ဘူး
သူနဲ့ လျှောက်လည်ဖို့ မင်းကိုလာခေါ်မယ်
မင်းကတော့ ငြင်းချင်တယ် ဒါပေမယ့် မငြင်းတတ်ဘူး သူ့အတွက်ဆို
ညဘက်ဆို သူ့ရဲ့အကြောင်း ကဗျာတွေပဲ မင်းစပ်ရူး
မင်းဘ၀ကို မင်းပြန်ဆန်းစစ် (လမ်းပျောက်ဖို့များ)
သူ့အတွက်နဲ့ ချောက်ထဲကိုမင်း (ဆန်းလျှောက်မလို့လား)
မင်းကိုမင်း မင်းပြန်ဆန်းစစ် (လွမ်းလောက်လို့လား)
မင်းလွမ်းရင်း ငိုကြွေးတုန်းမှာ သူစိတ်တိုင်းကျပြောမြူးလို့နေတာ
သူ့ရဲ့အဖွဲ့အနွဲ့တွေ မုသားတွေကြား မိန်နေခဲ့ရုံ
သူ့အကြောင်းတွေးပြီးဆို မအိပ်နိုင်မစားနိုင် အချိန်တွေပဲကုန်
အပျော်တွဲပြီး အတည်လို့ပြော ပေါ်တင်ကြီး လိမ်နေလည်းယုံ
အချစ်ရူးလို့ သူအရဲစွန့်ပြီး ဆွဲတာတောင် ငြိမ်နေမယ့်ပုံ
လုံးဝကာရန်မလှတဲ့အတွဲ သူ့ရဲ့တခါတရံမကတဲ့ အမှားတွေ ငါပြန်ပြခဲ့တယ်
မင်းရဲ့ အညာခံဘ၀နဲ့အမြဲ သူ့စိတ်ကျပေးစပ်ခဲ့လည်း ဘာပြန်ရခဲ့လဲ
ငါ့အမှောင်ထဲ အခန်းတွေထဲမှာ မီးကိုပိတ် ဒီလိုနဲ့လွမ်းနေခဲ့တာ
လန်းဆန်းတဲ့ငါ့ဘ၀တောင် ဘာလိုလိုနဲ့ နွမ်းကြေခဲ့ရ
တစ်ချိန်က ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ အနမ်းတွေမနည်းပါ
ပန်းတွေက စမ်းရည်ထဲမှာ ကမ်းခြေမဲ့စွာ မျောပါနေဆဲ
ငါကလည်း ၀မ်းတွေနည်းကာ အိပ်ရာထဲမှာ ရောဂါတွေနဲ့
ကြိုးစားပြီး လျှောက်တဲ့ကြားက ငါတစ်ကောင်တည်း လမ်းတွေလွဲလာ
သူနဲ့အတူ ရှင်သန်ခဲ့တဲ့ နှလုံးသားလည်း တစ်ခြမ်းသေခဲ့လား
အရင်ကငါတို့ဇာတ်လမ်း အနမ်းတွေနဲ့သာ အပန်းဖြေခဲ့တာ
အချစ်စစ်ရဲ့နတ်သုဒ္ဓါကို နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့သာ လှမ်းချွေခဲ့တာ
ဇာတ်လမ်းရဲ့အစက နုခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာ
အချိန်တန်တော့ နွမ်းကြေမြဲပါ အချစ်ဆိုတာလဲ
ခြောက်ကပ်ပြီး လမ်းနင်းချိုးတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ငါ
နင့်ကိုအမြဲ လွမ်းသင့်လို့လဲ လွမ်းနေခဲ့တာ
ငါ့ဘ၀ကို ငါ့ပြန်ဆန်းစစ် (လမ်းပျောက်ဖို့များ)
ဟေ့ကောင် ကြက်ဖ (လွမ်းလောက်လို့လား)
Labels: 9mm, HipHop, KyatPha
Broadcasted on 18 June, 2008 | 1:56 AM
ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်အကြောင်း - Theory (feat. Alex)
မအူမလည် သူငယ်ချင်းလေးတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်တယ်.. တကယ်လို့များ ဒီကမ္ဘာမှာ မြန်မာသီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲ ရှိသင့်တယ်ဆိုရင် ဘယ်သီချင်းဖြစ်စေချင်လဲလို့..
သူက ရိုးရိုးသားသားလေး ဖြေပါတယ် "ကမ္ဘာမကြေ" တဲ့။
မဟုတ်သေးဘူးလေ.. ရိုးရိုးသီချင်းမျိုးကို ပြောပါဆိုတော့ Theory နဲ့ Alex ရဲ့ ဟိုသီချင်းလေတဲ့။ ကဲ... ကျွန်တော်တို့ ဟိုးအရင်တုန်းက ခဏခဏနားထောင်ဖြစ်ကြတဲ့ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်အကြောင်းဆိုတဲ့ ဒီသီချင်းလေးကို နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ..
ဟိုတစ်ချိန်က နေ့လေးတစ်ရက်ကို မင်းဘယ်တော့မှ မမေ့တာကိုသိတယ်
မေ့မရတဲ့နေ့လေးတစ်ရက်မှာ မင်းအချစ်ကို ကိုယ်ရခဲ့တယ်
နောက်တစ်နေ့မှာ ကိုယ်ခရီးထွက်သွား မကြာခင်ပြန်လာမယ်ဆိုတယ် မင်းသိပေမယ့်
မင်းရင်ထဲက အလွမ်းတွေကို ကိုယ့်ကိုပြောပြထား
ကိုယ့်ရင်မှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ အချစ်လေးမင်းသိလား
အခုအချိန်မှာ ပြန်စဉ်းစား မင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ ချစ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းများ
ပြန်တွေးကြည့်ရင် အိပ်မက်တစ်ခုလို ပျော်စရာလေးများ ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့
လက်တွဲမဖြုတ်တမ်း တွဲကာလျှောက်ဆဲ မင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ နှစ်ယောက်တည်း
ဒီလမ်းမရဲ့ တစ်နေရာမှာ လူတွေအကုန်လုံး ၀ိုင်းကြည့်လည်း
ဒီလောကမှာမင်းကို အချစ်ဆုံး မင်းစိတ်တိုင်းကျကိုယ့်ရဲ့ဘ၀
မင်းရဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပဲ ဒါတွေအားလုံးဟာ အချစ်ကြောင့်ပဲ
ကိုယ်မလိုချင်တာမင်းရဲ့အမုန်း မဖြစ်စေနဲ့ ဒီအမုန်း
လောကကြီးမှာ မလိုအပ်ဆုံး မင်းဆီမှာ မထားနဲ့ အချစ်ဆုံး
အချစ်လေး မင်းမရှိတော့လဲ ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်း.. (တစ်ယောက်တည်း.. တစ်ယောက်တည်း...)
မရေရာနိုင်တဲ့ လမ်းတွေထဲ ဟိုး.. သေချာတာတွေ ဝေးသွားခဲ့
အချစ်လေး အလွမ်းများစွာနဲ့ ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်း...
စတွေ့မိတော့ ဒုက္ခ ချစ်တယ်ဆိုတော့ အနှုတ်ပြ
မေ့လို့မရနိုင် အိပ်မက်များခဲ့ ရင်မှာတွေးတဲ့ ဝေဒနာများတယ်
ဒါတွေကြောင့်ပဲ ငါ့မှာမူးတယ် ဒါတွေကြောင့်ပဲ အားလုံးပြောတယ်
ဖွင့်ပြောလိုက်တော့ မင်းကိုချစ်တဲ့အကြောင်း အချိန်မစွဲနဲ့
နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားမယ် နောက်ထပ်ရှိဖို့ဖြစ်မယ် ငါ့ကိုပြောတယ်
မိန်းကလေးစိတ်ကအပြောင်းအလဲမြန်တယ် ငါ့ကိုချစ်တော့ ငါထပ်ပြောတယ်
မင်းကိုချစ်တာ ကျေးဇူးတင် စိတ်မဆိုးချင်တော့ ထပ်ပြောချင်
ဘာထပ်ပြောမလဲ မင်းသိပါတယ် ကမ္ဘာကြီးလုံးတာဘယ်သူ့ကြောင့်လဲဟင်...
မင်းစတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ အဆုံးသတ်ဟာ ဘယ်လိုလဲ အဆွေးများနဲ့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလား
မင်းအမုန်းများအောက်မှာ ကျဆုံးခဲ့တယ်.. ရက်စက်မှကြေကွဲ...
မင်းတောင့်တလိုက်ရင် သေဆုံးဝံ့တယ်... မင်းစိတ်နဲ့ ကိုယ်ပဲ
မင်းတောင့်တလိုက်ရင် သေဆုံးဝံ့တယ်... မင်းစိတ်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်
မင်းတောင့်တလိုက်ရင် သေဆုံးဝံ့တယ်... မင်းစိတ်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပဲ...
Labels: Alex, BarBu, HipHop, Oldies, Pop, TharSoe, Theory
Broadcasted on 17 June, 2008 | 11:57 PM
အရည်ထုတ် - ရဲလေး၊ J-me၊ ကြက်ဖ
ဒီတစ်ပုဒ်ကတော့ ကျွန်တော် လေးစားတဲ့ Graphic Designer အစ်ကိုတစ်ယောက် နားထောင်ဖြစ်တဲ့ ၁၀ စက္ကန့် album ထဲက အရည်ထုတ်ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ သူ့ကို surprise လုပ်မယ်ဆိုပြီး တင်လိုက်တာပေါ့။ မကြားဖူးရင် နားထောင်ကြည့်လိုက်ဦးပေါ့။ ကြားဖူးရင်လည်း နောက်တစ်ခေါက် Lyrics ကြည့်ရင်းနဲ့ လိုက်အော်ကြဗျာ..
ရဲလေး.. J-me... ကြက်ဖ... Here we go..
ကောင်းတာတွေစား ကောင်းတာတွေဝတ် အကောင်းစားတွေပြော သတိထား မင်း လူပေါင်းမှားနေတော့ ငါတို့ကပြင်ပေးလို့မရ မင်းအကျင့်ကို လူတွေအထင်သေး နေထိုင်ပုံယဉ်ကျေးဖို့က ဆိုးပြီးရင်း ဆိုးဖို့မြင်နေ.. La Bitch..
မင်းတစ်ယောက်ပဲ အလွဲတွေကိုပြော မင်းတစ်ယောက်ထဲလွဲ မင်းတစ်ယောက်တည်းပဲ အမြဲ လူတွေဝိုင်းဆွဲ လမ်းမှားနေခဲ့.. ကဲကဲကဲ ကဲဘယ်လိုလုပ်မလည်း ရင်ဘတ်တွေကသပ်နေကြဆဲ နောက်ဆုံးတော့ အရှက်တွေသာကွဲ
ဖြစ်ပျက်တာတွေများနေချင် စကားတွေမရှင်း မင်းတကယ်ကို အလုပ်မရှိလို့အားနေရင် အိမ်ကိုလာ ဘုရားရှေ့မှာ ဒူးထောက်လို့ ကျိန်ဆိုပါ ဘယ်တော့မှ
မရှုပ်တော့မယ့်အကြောင်း အရင်လို Groupie ကြီးမဟုတ်တော့တဲ့အကြောင်း
ငါပြောစရာမရှိ ငါပြောရခက် ငါချော့မှသိတော့ မင်း ဇောတကတက် နောက်တစ်ခါဆိုသေပြီသာမှတ် ကြက်ဖလို ၀မ်းနည်းပါတယ် မင်းဘာမှ လာမရှင်းနဲ့တော့ ကျန်တာအားလုံး ကဲ ရဲလေး မင်းပဲပြော
Hey Lady ဆိုးသွမ်းရင်းနဲ့ အမှားများစွာနဲ့ ဘ၀ကို နင်နိုင်ဘူးတော့ ဝေးနေ ဖေးမမယ့်လူမရှိတော့
Hey Lady ဆိုးသွမ်းရင်းနဲ့ အမှားများစွာနဲ့ ဘ၀ကို မမြင်နိုင်ဘူးတော့ ဝေးနေ ဖေးမမယ့်လူမရှိတော့ အခုထိဝေးဆဲ
ငါတို့ အမြဲတမ်းမဆုံနိုင်တော့ပါ ကိုယ့်လမ်းကြောင့် နင်အမြင်လွဲကာ ဆိုး.... ဒီမှာလေ မင်းဦးဏှောက်ကို ဆေးကြောသင့်ပြီ တိုးတိုးလေးနဲ့ပဲ အမျိုးမျိုးပေးခဲ့တယ် နာကျင်ဒါဏ်ရာတွေလည်း ပြန်မလာပါစေနဲ့ ဒီလိုဝေးကွာ -- Lady မင်းဘာပြောမလဲ
Woo.. Let me go ချစ်သူ မုန်းရက်ပြီမို့ ငါအပြစ်မယူ အပြစ်မယူ အပြစ်မယူ
Hey Lady ဆိုးသွမ်းရင်းနဲ့ အမှားများစွာနဲ့ ဘ၀ကို နင်နိုင်ဘူးတော့ ဝေးနေ ဖေးမမယ့်လူမရှိတော့ အခုထိဝေးဆဲ
ကဲကိုကဲ သည်းကိုသည်းတယ် အမြဲလိုလည်း ရေမကူးတတ်တဲ့ ဘဲလိုပဲ ရုတ်တရက်ဆို ကျွတ်ကျဲသလိုနဲ့ ဟန်ဆောင်ပြီး အပြုတ်လိုတဲ့ပဲလိုပဲ ကတ်စီး ထမင်းနဲလိုချွဲ ငါးပိရည်ကို ရွက်ယိုရွက်နဲ့ တို့ပြီးဆွဲဆိုဆွဲမယ်
မင်းကိုတော့ မရဲသလိုပဲ တော်ပြီ ဆားနဲ့ပဲ စားမယ်ဆိုတဲ့အဆွဲကိုလည်း ချွတ်လို့မရ ဇွဲပိုနေတယ် မထင်နဲ့ အချစ်က ကုတ်လေယားတဲ့ဝဲလိုပဲ မင်းကြောင့် တချို့ကြ အတိတ်တွင်ဒုတ်တွေဓါးတွေဆွဲလိုဆွဲ တချို့က ကွဲလိုကွဲ ပြဲလိုပြဲ တချို့များ အချစ်ဟာ ခါး ခါး ခါးနဲ့ အော်နေလိုက်ကြများကို အငဲလိုပဲ အဲ့လိုကဲ လှတပတ ကြွကြွရွရွ နေတယ်ဆိုမှ အသည်းပိုကွဲ အဲ့လိုအမြဲ ကြုံရင်ပေးတဲ့ ဆင်ခြေ ဘယ်သူကခွဲလို့လည်း
ခွဲမလိုနဲ့ တွဲမလိုနဲ့ ကြိုးရှည်ရှည်ကိုင်လှန်ထားတယ် စွတ်ဆွဲလိုဆွဲ တွေ့ခဲ့ရင်တော့ ဘယ်ကိုလည်း တွေ့ခါစမှာ အကဲပိုမြဲ တစ်နေ့တစ်ယောက် ထည်လဲလို့တွဲ ၀ဋ်ဆိုတာလည်တယ် မင်းဘ၀လဲ လဲပြိုမယ်
ဟော ပြောရင်း ဗိုက်ကလေးတောင်မှ ပိုဖောင်းခဲ့သလိုပဲ မျက်နှာပေါ်အနုအလှဆင် စိတ်ဓါတ်ကတော့ မဲညိုဆဲ အဆင့်အတန်းတွေခွဲလိုခွဲ ဆက်ဆံရေးတွေ ကျဲလိုကျဲ ပြီးမှ လက်သည်ရှာဖို့ ငါ့ကိုမေးတယ် ကဲဘယ်လိုလဲတဲ့ ဘယ်လိုမှ မလဲဘူး အဲ့လိုပဲ အဲ့လိုပဲ
Hey Lady ဆိုးသွမ်းရင်းနဲ့ အမှားများစွာနဲ့ ဘ၀ကို မမြင်နိုင်ဘူးတော့ ဝေးနေ ဖေးမမယ့်လူမရှိတော့ အခုထိဝေး
Lady hey.. Lady ဘာရွေးမလဲ အခုထိဝေးဆဲ
Lady hey.. Lady ဘာလုပ်မလဲ အခုထိဝေးဆဲ
Labels: HipHop, J-me, KyatPha, YeLay
Broadcasted on 15 June, 2008 | 7:01 PM
အတိုင်းထက် အလွန် - နောနော်
ဒီ site ကို ဘာမှမတင်ပဲထားခဲ့တာကြာပေမယ့်လည်း တချို့တချို့သော visitor တွေ ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ အခု ပြန်လည်တင်နိုင်အောင် ကြိုးစား တင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အပြင် ဒီ site ကို ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ မလုပ်တော့ပဲ contributor များနဲ့ ပူးပေါင်းကာ ပိုပြီး မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် လုပ်လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် contribute လုပ်လိုသူများ ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း။
အခု ပြန်စဖွင့်လိုက်တဲ့ သီချင်းလေးကတော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ညီလေးတစ်ယောက် နားထောင်ဖြစ်တဲ့ နောနော်ရဲ့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့။ လူတိုင်းလည်း ကြိုက်ကြ နားထောင်ကြတဲ့ သီချင်းလေးဖြစ်မှာပါ။ ကဲ နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
အိပ်လို့မရဘူး မျက်လုံးတွေ မှိတ်သေးဘူး
မြင်နေတယ်အခုထိ မင်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါလေးပဲမြင်ယောင်ရင်း
လွဲလို့မရဘူး အာရုံက ဒီစက်ကွင်းထဲ
အချိန်ခါတွေ မနည်းဘူး အခုထိ မင်းအကြောင်းစဉ်းစားကာနေတုန်း
ဒီလိုညတိုင်း ငါနဲ့မင်း အတူနေခွင့်ရှိရင်...
ဒီလိုညတိုင်း ငါနဲ့မင်း အတူဆုံခွင့်ရှိရင်...
စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ မကပ်တာ အိုမင်းကြောင့်
ဘယ်အခြေအနေရောက်ရောက် အတွေးထဲ မင်းပဲ ရောက်ရောက်လာနေတယ်
အချိန်တွေတိုင်းပဲ ငါ့စိတ်က မင်းအနားရောက်ရောက်လာနေတယ်
ဒီလိုညတိုင်း ငါနဲ့မင်း အိုဆုံတွေ့ဖြစ်ရင်...
Labels: Blues, NorNaw
Broadcasted on | 5:48 PM
အချစ်ရူးမလေး - ချမ်းမြေ့
ညဆိုအိပ်မက်ထဲ နှိပ်စက်တယ် ကောင်မလေး
မနက်ဆို နှိုးစက်လို ဖုန်းလေးဆက်တာ နေ့တိုင်းလေ
အိပ်ရာထ မျက်နှာသစ်လို့ ပြီးတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ
ဘဲလ်သံက ကြားပြန်ရ အရှေ့မှာ ဒီမနက်စာ
အလုပ်ကမပြီး ဒေါသကြီးတတ်တဲ့ အချိန်များမှာ
ဖုန်းသံက ကြားနေကျ မင်းရဲ့ အသံလေးကို
ငါ့စိတ်ထဲ တောင့်တဆဲ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလို
အလုပ်ကဆင်း ရှေ့လှေကားရင်းမှာ သူရပ်ကာ
စောင့်နေကျ တို့မျှော်ရတဲ့နေ့မှာ သူကမလာ
တွေးနေရင်း ရှေ့ဘက်နား ဟိုးအဝေးမှာ သူရပ်ကာ
အခုချိန်မှ ငါ့စိတ်များလေးတာ အကုန်ရပ်ကာ
အတွေးတွေထဲ မင်းက ကြီးစိုးနေတာ ငါမသိပါ
ငါ့စိတ်ထဲ မင်းကိုပဲ မတွေ့ရရင်မနေနိုင်တော့ပါ
ကလေးရယ် နင်ထွက်မသွားနဲ့ ငါ့ရင်ထဲ...
ဒီလိုနဲ့ တို့နှစ်ယောက် တွေ့ခဲ့တဲ့ အချိန်ကကြာ
မင်းကိုပဲ ငါ့ရင်ထဲ စွဲမြဲကာ ပိုချစ်လာ
ငါ့စိတ်ထဲ မင်းကိုပဲ မချစ်ရရင် မနေနိုင်တော့ပါ
အချစ်ရယ် နင်ထွက်မသွားနဲ့ ငါ့ရင်ထဲ...
အိပ်ရာထ မျက်နှာသစ်ပြီးတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ
မင်းကို မျှော်နေမိတယ်... ချစ်သူရယ်...
Labels: Acoustic, ChanMyay, Pop
Broadcasted on 13 February, 2007 | 4:01 AM
အသက်လို - စည်သူလွင်၊ ကဗျာဘွဲ့မှူး
ဒီရင်ထဲမှာ မင်းကို အသက်လိုချစ်တာ
ဒီရင်ထဲမှာ မင်းကို အသက်လို ချစ်တာ
ထာဝရလမ်းမှာ အချစ်တွေ အမြဲရှိလိမ့်မယ်
Labels: Blues, KaByarBwaeMhoo, SiThuLwin
Broadcasted on | 3:40 AM
သတိရရင်ပြီးတာပဲ - မျိုးကျော့မြိုင်၊ ကဗျာဘွဲ့မှူး
လူတွေက သိပ်ပြောတယ် ကြင်နာသူ သူ့အကြောင်းလေး
အို အဆိုးတွေ အဆိုးတွေ အများကြီး ကိုယ်နားထုံသွားအောင် ကိုယ်ကြားပြီး
ဘယ်အခါကိုယ် မမေ့သေးတဲ့ ကြင်နာသူ သူ့အပြုံးလေး
ဟိုအပြုံး ဒီအပြုံးတွေ သတိရ ဆင်ခြင်ဖို့ဆိုတာဝေးလွန်းတဲ့ ကိုယ်နှလုံးသား
ဘယ်နေရာမှာ ရှိလိမ့်မလဲ ကိုယ်ကိုတိုင်လဲမသိတယ်
ဒီတစ်နေ့လုံး ဒီတစ်ညလုံး မင်းရဲ့အကြောင်းကိုတွေးရင်း
ဘယ်သူနဲ့ မင်းရှိမလဲ ဘယ်ရင်ခွင်မှာ အိပ်စက်မလဲ
ကိုယ်မသိဘူး မဆိုင်ပါဘူး မင်းလေးကိုယ့်ကို သတိရရင်ပြီးတာပဲ
သူပြန်လာမလားလို့ ကိုယ် အိမ်ရှေ့ရှိတံခါးလေး အို အမြဲဖွင့်ထားတယ် လာခဲ့ပေါ့
Labels: KaByarBwaeMhoo, MyoKyawtMyaing
Broadcasted on | 3:33 AM
အရင်လို - ရည်မွန်၊ ရဲလေး
အချိန်တွေဟာ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီ နေ့နဲ့ညနဲ့အခု
အရင်မှာ မင်းနဲ့ အဖြစ်ကို
အတွေးထဲမှာ သတိရနေလို့ ရင်ထဲမှာ ညည်းတဲ့သီချင်း
တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတိတ်ကို ပြန်လည်တူးဆွ သီဆိုနေရင်းနဲ့ပဲ
ဂီတရဲ့လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်နေခဲ့ အခုချိန်မင်းနဲ့ငါ
ခြေကုန်ကာလက်ပန်းကျ နေ့ရက်များမှာ ရင်းခဲ့တာ
နောက်ဘက်က ထောက်ပံ့ပေးမဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း ဆိုတာမရှိ
အောင်မြင်မှုကိုပဲ ရယူချင်တယ် လမ်းမှန်ဆိုတာမသိ
မက်မောမှုစည်းစိမ်နောက်ကို ငါကိုယ်တိုင်ပဲ လိုက်ပြန်တော့တာ
အချစ်ဆိုတာ ပျောက်နေခဲ့ လမ်းမှားတွေလည်း လျှောက်နေဆဲ
ဒီအကြောင်းတွေ မင်းသိနိုင်အောင် ပြောပြချင်ပေမယ့်လည်း
I Love You မမေ့ဘူး ချစ်သူ I Love You.. အနိုင်ယူရင်း
I Love You အရင်လိုတို့နှစ်ယောက် တွေ့ကြနိုင်မလား..
အခုထိ I Love You အချစ်လေး
မပြောပါနဲ့တော့ ငါမင်းအတွက် အရာရာတွေးပြီး စာနာပေးမှာ
ရှေ့ဆုံးကပဲ ရှောင်ပြေးလို့မရ ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မင်းနဲ့ တွေ့ဦးမှာပဲ
ငါမင်းကိုမေ့လို့မရခဲ့ သံယောဇဉ်လက်ကျန်တွေက မကုန်နိုင်တုန်းပဲ
မသိစိတ်က ဟိုအရင်ကလို ဆုံနိုင်ဦးမယ့် နေရာတွေမှာ တွေ့ချင်ပါတယ်
တစ်ညက သတိရလွန်းလို့ မင်းအကြောင်းတွေ studio မှာရေးချင်လာတယ်
အလွမ်းတွေက တသသ အနမ်းတွေက တစ်ဖွဖွ
ဒါမင်းအတွက် ရေးတဲ့သီချင်း မုန်းမသွားနဲ့ ကိုယ့်ကို
မင်းမိသားစု မင်းဂီတနဲ့ မင်းဘ၀တွက် ရုန်းကန်နေရပြီပေါ့
အရေးကြီးတဲ့ စားဝတ်နေရေး ဒါတွေကို နားမလည်
လူတွေ အမြင်မှာ အမှားဖြစ်နေသေး
ဒီအကြောင်းတွေ မင်းသိအောင် ပြောပြချင်ပေမယ့်လည်း
တို့နှစ်ယောက်ပြန်ဆုံကြ အောင်မြင်မှုတွက် ဆက်သွားမယ့်ပန်းတိုင်
အချစ်တွေကိုဦးစားပေး ဘ၀က ဘယ်လိုမမှန်းနိုင်
ငါရှိနေပါ့မယ် အခက်ခဲနဲ့ ဒုက္ခတွေ့ကြုံနေပြီဆိုရင်
မင်းစိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့ ငါနဲ့အတူတူ သီချင်းဆိုတော့ကာ
မလိုတော့ပါ အတိတ်ကာလ ထားခဲ့ဘူးတဲ့ အာဂါတရဲ့ အမုန်းတွေ
ငါ့ရှေ့မှာ တီတီတာတာလုပ်ပြနေတဲ့ ဟန်ဆောင်အပြုံးတွေ
ဒီအချိန်မှာ အားလုံးမေ့လိုက် မေ့လိုက် အမြဲတမ်းရှိနေပါ့မယ့်
မင်းအကြောင်းတွေ ရေးလို့ထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်က ငါ့အတွက်အမှတ်တရ
အပေါင်းအသင်းလို့ သတ်မှတ်လိုက်ပြီ ငါ့ရဲ့ဘက်က
ဘယ်တော့မှ မနီးစပ်ချင်တော့ဘူး အပြီးသတ်လို့ ကျန်ခဲ့ပါပြီ
Labels: Pop, Rap, YeLay, YiMon
Broadcasted on | 3:24 AM
အထီးကျန် - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
မင်းမရှိတဲ့ နေ့တွေရယ် ငါတစ်ယောက်ထဲ အားတွေငယ်
ကမ္ဘာတစ်ဘက်မှာ နင်နေထိုင်တယ် ကမ္ဘာတစ်ဘက်မှာ ငါနေထိုင်တယ် ကမ္ဘာတစ်ဘက်ဆီ ဝေးလို့နေလို့ ဆွေးလို့ မြေ့လို့ ငါခွေယိုင်လဲ ကမ္ဘာတစ်ဘက်မှာ နင်ချန်ထား ကမ္ဘာပျက်မှာလား
ကမ္ဘာမြေက တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြား မဆုံနိုင်အောင် ကာဆီးကာထား ကမ္ဘာတစ်ဘက်မှာည ကမ္ဘာတစ်ဘက်မှာနေ့ နာရီမိနစ် စက္ကန့်အားလုံး စောက်ထိုးမိုးမျှော် ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်ပြီဟေ့
ဟိုးအဝေးနင်ထွက်ပြေး ငါ့ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာ ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့အချစ်ကိုနင် စာနာပါ အမြန်လာပါချစ်သူရယ် စိတ်ကောက်ကြတဲ့နေ့ကိုလွမ်းလို့ တမ်းတတယ် အရမ်းကို မင်းရှိတဲ့အရပ်ကို အမြဲကိုမှန်းလို့ မနက်နိုးရင် မေတ္တာပို့ ဘုရားမှာဦးချ သစ္စာဆို မဖောက်ပျက်ဘူး ငါ့ရဲ့စိတ်က ပက်ပက်စက်စက် ချစ်တာမို့ မင်းစိတ်ကြိုက်ဖြစ်လာဖို့ တစ်ခုချင်းကို ငါလေပြုပြင် လူတွေရဲ့ အထင်အမြင် အယူအဆတွေကို ငါလေ မမှုချင် အချိန်ရှိတိုင်းမင်းကိုလှမ်းမျှော် ပြန်မလာမှာ ကြောက်နေတယ် စောင့်နေခဲ့ လက်ချိူးရေလို့ နေ့ရက်တွေမှာ ဆောက်တည်ရာမဲ့
တစ်ယောက်တည်းပဲ နေတော့မယ်လို့ ရက်ရက်စက်စက်မင်းကပြောတယ် တစ်ယောက်ထဲပဲ ကျန်ခဲ့မှာမို့ ပက်ပက်စက်စက် ငါရင်မောတယ် မွန်းကြပ်နေခဲ့ ငါ့အခန်းထဲမှာမင်း အငွေ့အသက်တွေ အဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့ ငါ့အလွမ်းများအတွက် သီချင်းသက်သေ အားလုံးက အတင်းဖျက်နေ မတူညီတဲ့ အဆင့်အတန်းသဘောမျိုး တဇွတ်ထိုးတတ်တယ် ငါ့အကျင့်က ဆင်ကန်းတောတိုး နေမြင့်တော့ အရူးရင့်လာ မင်းပေးတဲ့ ဥပေက္ခာ ခံရခက်တဲ့ဝေဒနာက ရင်ဘတ်ထဲမှာ စူးနင့်လာ သင်္ချာသင်ခန်းစာမှာ Base တူမှ Power ချင်းပေါင်းတယ် အခြေအတွေ မတူညီတာက မင်းရဲ့ ဘ၀က လာချင်းကောင်းတယ် မင်းငါ့ကို မကြိုက်ဘူး လုံးဝကိုမမိုက်ဘူး ဒါနဲ့လဲစိတ်မကုန်ဘူး ငါ့ရဲ့ အဖြစ်က မိုက်ရူးရဲ ငါ့အနားမှာ မင်းရှိခဲ့ ငါ့ဘ၀ကို ငါကျေနပ်တယ် မင်းနဲ့ အတူနေတဲ့ အချိန်တိုင်း ဘ၀င်ကိုလေဟပ်တယ် ငါ့အနားမှာ နင်မရှိတော့ ငါ့ဘ၀ကို ငါအားငယ်လို့ ဒီသီချင်းက ငါ့အချစ်ကို နင်နားလည်ဖို့
ကတိတွေလဲ စကားတွေလဲ တိမ်လိုလွင့်မျောသွားပြီပဲ
အလွမ်းတွေနဲ့ အဆွေးတွေနဲ့ ဘယ်လို ငါရင်ဆိုင်ရမလဲ
မင်းမရှိပဲ ဒီလူ့ဘ၀ထဲ ငါမနေတတ်ဘူး ချစ်သူရယ်
နာကြည်းတတ်တဲ့ စိတ်တစ်ခုကို ငါရချင်တယ်
ခွင့်မလွှတ်တတ်တဲ့ စိတ်တစ်ခုကို ငါရချင်တယ်
Labels: Pop, Rap, SaiSaiKhanHlaing
Broadcasted on | 3:18 AM
အိမ်လွမ်းသူ - ၀ိုင်ဝိုင်း
အချိန်မှန်ရထားကြီးပြေးထွက်ခဲ့ အဆုံးမဲ့ မီးလျှံထဲ
ပြန်လမ်းမရှိတော့တဲ့ ဘ၀သစ်ထဲ ပျော်ဝင်ဖြတ်သန်း စီးဆင်းဆဲ
ခိုလှုံရာအရိပ်နဲ့ လမ်းခွဲထွက် ဒါဘ၀ရဲ့ ခရီးတွေပဲ
ရင်မှာမောပန်းရင်းနဲ့ ဝေးလွင့်ရင်း ငါဟာ အိမ်ကိုလွမ်းနေသူ...
ငါအိပ်မက်ထဲထိလွမ်းဆဲ ဘယ်တော့မှ မရောက်နိုင်ခဲ့
အဖြူရောင်ခြယ်တဲ့ နှလုံးသားများ ဘယ်မှာရှာလို့တွေ့လိမ့်မလဲ
ဒီပင်လယ်ကြီးရဲ့ ဟိုးတစ်ဖက်ကမ်း ငါလှမ်းရင်းမှန်းမျှော်ဆဲ
ဒီရင်ကိုချည်သော ကြိုးတင်းခဲ ငါအိမ်ပြန်ရန်မဖြစ်နိုင်သူ
ကြေကွဲခြင်းနဲ့ ငိုရှိုက်ခဲ့ညတွေ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ
ဒါဏ်ရာနဲ့ ရထားကြီးပြေးထွက် အဆုံးမဲ့ မီးလျှံထဲ
ဒီပြန်မဆုံနိုင်တဲ့အသိက ရင်ကို အချိန်မှန် လှုပ်ခတ်နှိုး
မောပန်းခြင်းနဲ့ ၀ဲလည်ရင်း ငါအိမ်ပြန်မရောက်နိုင်သူ
Labels: Classic, Country, YWyne
Broadcasted on 12 February, 2007 | 7:30 AM
အမေ့အိမ် - ထူးအိမ်သင်
လောကရဲ့ လမ်းများပေါ် လျှောက်သွားရင်းနဲ့ မောပန်းနွမ်းနယ်
နှလုံးသားကလွမ်းဆွတ်လို့ တမ်းတမိခဲ့ အမေ့ရဲ့အိမ်ကို
အေးမြတဲ့ အမေ့ရဲ့မေတ္တာရိပ်နဲ့ ဝေးခဲ့သူမို့
ခြောက်သွေ့တဲ့ အိပ်မက်ရှည်တွေကြားထဲမှာ အရိပ်တစ်ခုလွင့်ပြယ်
အေးစက်တဲ့ နေ့ရက်များ တိုက်ခိုက်ကြလို့ အားနည်းနေပြီဆို
တင်းထားတဲ့ စိတ်ဓါတ်များ ပြိုကွဲသွားမလား စိုးရိမ်လို့
ရင်မှာ ဒါဏ်ရာများ နာကြင်နေပြီကွယ်
အိမ်ပြန်ချင်တယ် ဟူး... အငြိမ်းချမ်းဆုံး အမေ့အိမ်
အိမ်ပြန်ချင်တယ် ဟူး... အနွေးထွေးဆုံး အမေ့အိမ်
အိပ်မရတဲ့ ညများစွာထဲ ဟိုး... ရထားဥသြသံလေးများ ကြားရင်
အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ စိတ်ကလေး တားမရဘူး
မွန်းကြပ်တဲ့ မြို့ပြလူနေမှုစနစ်မှာ စီးမျောရင်းနဲ့ပဲ
မပြီးသေးတဲ့ ခရီးတစ်ခု အဆုံးထိရောက်ဖို့ ကြိုးစားနေသူမှာ
ရိုးသားတဲ့ ကျေးလက်က အမေ့အိမ်ကလေးအကြောင်း တွေးမိနေလို့
မြင်ယောင်ကာ အိပ်မက် အလိုလိုငိုချင်တယ်
အမေ့အိမ်ပဲလို့ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်က
Labels: Blues, Country, HtooEinThin
Broadcasted on | 7:29 AM
ပဲ့ကိုင်ရှင် - ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ အီတိုး
ဒီရင်ကိုဖြိုခွဲ လက်ညှိုးပေါင်းများစွာရယ် ထိုးနှက်
အဖေ့ရဲ့ ဂရုဏာဒေါသ ကြင်နာမှုအပြည့်နဲ့ စကားတွေ
လှုပ်နှိုးမှုပဲ့တင်သံ ကိုယ့်နားထဲ ကြားယောင်ဆဲ
စိတ်မိုက်ကိုရွက်လွှင့် မာနနဲ့ လှော်ခတ်ရင်း
Labels: EToe, Rock, ZawWinHtut
Broadcasted on | 7:28 AM
လွမ်းရယ်မပြေ - 19:18
အလွမ်းရယ် မပြေဘူး ကျောင်းသားဘ၀
Labels: 19:18, Alex, Pop, SaungOoHlaing, SiThuLwin
Broadcasted on | 7:27 AM
Labels: ChoPyone, Classic, Oldies, Remix, ThanMyatSoe
Broadcasted on | 7:26 AM
ဒုက္ခလမ်းမများ - အယ်နောင်း
မြင်နေကြ ငါ့ရဲ့ အခန်းနဲ့ ငါ့ရဲ့အိမ်
နာကျင်လွန်းတာ အမေ သိများသိနေရင်
မေမေ သိအောင်လေ သားလေး ရှင်းမပြ၀ံ့ပါ
ဒီမှာ လမ်းမများ အိုသားရဲ့အိပ်မက်တွေ နင်းလို့
Labels: AlNaung, Pop
Broadcasted on | 7:24 AM
'မ' မရှိနေ့ရက်များ - ငယ်ဆူး၊ ညီသူ
အဆိုးနဲ့ အကောင်း အကျိုးနဲ့ အကြောင်း တားမရပါ ကံကြမ္မာကြောင့်
ခဏလောက်ဝေးတဲ့ဘ၀ ထင်မှတ်တယ် ဆယ်ကမ္ဘာ
"မ" ပုံရိပ်တွေ စိတ်ကုန် အတိတ်တွေ အပြီးသတ်ဆုံးပါစေ မြင်ဆဲပဲ
ခဏလောက် "မ" နဲ့ဝေးတဲ့ဘ၀ဟာ ဆယ်ကမ္ဘာလောက်များလား
ဖုန်းလေးဆက်လို့ စကားပြောရတောင် မောင်မကျေနပ်ဘူးမရေ
မရဲ့ အနားမှာ အမြဲတမ်းရှိချင်တာ
နေ့တိုင်းပဲ စောင့်နေမိတယ် ပြန်လာမယ့်နေ့ရက်တွေ
နေ့တိုင်းပဲ ကြားချင်မိတယ် အချိုသာဆုံးသော စကားတွေ
ဘယ်လောက်ဝေးဝေး "မ"ရယ်ယုံပါ "မ"ရဲ့နဘေးနား အမြဲတမ်းရှိချင်တယ်
"မ" ရေ... ဟူး.................
ဘယ်သူကြောင့် ဘာဖြစ်ဖြစ် အခုစောင့်လာတဲ့ အဖြစ်
အသက်ရှူတွေ ကျပ်တဲ့ည ကျွန်တော်မေးမယ် မဘယ်မှာ
အလုပ်လို့လည်း လုံးဝမရပါ အာရုံတွေက မရှိ
ရင်ခုန်သံ စည်းချက်များလည်း ကာရန်တွေဟာမဲ့
ဝေးသွားတော့မှ မောင့်ရဲ့အချစ်တွေ ပိုပိုလာသလားမသိ
ဒီသီချင်းလေးများဟာ အချစ်ရဲ့ သက်သေပေါ့
(တစ်သက်စာ အထီးကျန်ခဲ့တဲ့ "မ" နဲ့ ကျွန်တော့်ဘ၀)
Labels: NgeSuu, NyiThu, Pop, Rap
Broadcasted on 08 February, 2007 | 1:26 AM
ရေစုန်မှာမျော - Unknown
ဒဏ္ဍာရီထဲက အချစ်တွေ ကျွန်တော်မသိပါ
ပုံပြင်တွေထဲမှာဝင်နေ “မ” အရိပ်တွေကိုလည်း
ဆယ်ခါပြန်ကြည့်လို့ မ၀နိုင် ဒီမျက်ဝန်းတစ်စုံ
ဘယ်အခါကျွန်တော် မေ့နိုင်မှာလည်း တွေးကြည့်ပါလေ
“မ” က ရင်မခုန်ဘူးလား
ကျွန်တော့်ကို မထားရစ်ခဲ့ပါနဲ့ “မ” မှ မချစ်ရင် ကျွန်တော့်ဘ၀လေးလည်း
ရေစုန်မှာမျောလိုက်တော့မယ် အဝေးတစ်နေရာ ရောက်နေပါ့မယ်
Broadcasted on | 12:42 AM
ကျွန်တော်ချစ်သော မမ သို့ - ရသ (feat. ရဲလေး)
ပြက္ခဒိန်တွေလည်း အားလုံး ပြီးခဲ့တာ ပြီးခဲ့ပေမယ့်
မ မသိခဲ့လေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရှိမြဲနေဆဲ
မ ကမကြည့်နဲ့ သေမယ်လို့ ပြောရင် ကျွန်တော့ရင်ထဲမှာ ချိနဲ့ရင်နဲ့နေခဲ့
ခေါင်းတွေကို ငုံ့ပေးကြည့်လိုက်ပါကွယ် မ ခေါင်းပေါ်က နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်ကို
အခု အုံ့မွှေးပြီး အခိုက်မှာပဲ အချစ်ဆိုတာ ရင်ဘတ်ထဲဝင် ရှုတ်ထွေးအသိမိုက်စွာနဲ့
ကလေးတစ်ယောက်လို မုန့်ကျွေးပြီး မကြိုက်ပါနဲ့
ကျုပ်ပြေးပြီးရိုက်မှာပဲ မ ဆီကို ဘယ်ယောက်ျားမှ ကပ်မလာနဲ့
ခက်တာပဲ မ မျက်နှာမဲ့အောင် ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး
မဖြတ်ပါနဲ့ သံယောဇဉ် ဆက်ကာစွဲ ချစ်တယ်လို့ပြောဖို့ မရှက်ပါနဲ့
ဖတ်ပါကွယ် ကျွန်တော်ရေးထားခဲ့တဲ့ Diary ညညဆို
ကျွန်တော်ချစ်သော မမ သို့
သော့ခတ်ပြီး သိမ်းထားဆဲပါ ငါ့ဘ၀လို မရမကကို
ဒီသီချင်းနဲ့ပြောပြခဲ့မယ် ကျွန်တော့် တစ်ချိန်က မမသို့
မှောင်မိုက်ခြင်းတွေကို ဖောက်ခွဲ ဒီကမ္ဘာအား အလင်းပေးသလိုပဲ
အကြင်နာဆုံး မ ရဲ့အချစ်နဲ့ ရင်မှာအမြဲ နွေးထွေးသွားခဲ့
အားလုံးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့မိ ကိုယ်အချစ်ဆုံး မ ရှိရင်ကွယ်
ငါနဲ့ ဝေးရတဲ့ နေ့ရက်များပဲ နာကျင်စွာ တွေဝေကြေကွဲ
ကစားနည်းလေးပြောင်းလည်းသွားခဲ့ မ အချစ်ကိုစောင့်နေမိခဲ့
မပြောဖြစ်လို့နာကျင်နေတာ ချစ်ခဲ့တဲ့စိတ်က ပိုင်ဆိုင်ချင်တာ
မ စိတ်နဲ့သွား မ စိတ်နဲ့စား မ ရဲ့စိတ်နဲ့ အိပ်ရာထ
မ ရဲ့ရင်ခွင်ထဲ အို ဘယ်သူများရှိခဲ့လဲ
အခုညလိုမျိုး အိပ်လို့မရနိုင်လို့ အိပ်ရာထဲက အော်လို့ငါ
မရဲ့ နာမည်ကို ကျွန်တော်ခေါ်နေတာ မ က မကြားနိုင်လို့
အခုမရှိတော့တဲ့ အနမ်းလွမ်းပြီး ကျွန်တော့်အခန်းထဲ လှမ်းကြည့်
မ ပေးခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံမှန်းပြီး မေ့ဖို့ရန် လမ်းမရှိ
လက်ကမ်းပြီးကြိုနေခဲ့ ဒီသီချင်းကို ဆိုနေမယ် မ အတွက်
ဒါအတွက် ပိုပြီးတော့ အဓိပ္ပါယ်ရှိအောင် အမုန်းတွေ ခဏရပ်
မဘယ်လောက်ပဲ ပျက်ရယ်ပြုခဲ့ ငါ့တစ်ယောက်ပဲ ဖက်တွယ်ဖူးခဲ့
ဖြစ်နိုင်ရင် အရင်ရည်းစားနဲ့ လာမနှိုင်းပါနဲ့
လာခိုင်းတာ အိမ်ကို တစ်ခါမှ ကျေကျေနပ်နပ် ဖိတ်ခေါ်ဖူးလား
ကျွန်တော့်ကိုရော သိပ်ပျော်ဖူးလား မေးကြည့်ဖူးလား တွေးမကြည့်ဖူးလား
မ ချစ်သူ ဘယ်လိုနှိပ်စက်ခဲ့ မေ့ပစ်လိုက်
ဟိုအတိတ်ရက်အတွက် ပျော်အောင်ထားမယ် စိတ်ကူးလေးနဲ့
ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ မ ရင်ခွင်ထဲ မအိပ်ဖူးသေးဘဲ
နေ့စဉ်ရက်ဆက်တွေထဲ မ ကရှောင်ပြေးမှာ
မ အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးတော့လည်း ဒုက္ခရောက်မှာ ကောင်ကလေးပါ...
Labels: HipHop, Pop, Rap, RnB, Yatha, YeLay
Broadcasted on | 12:00 AM
SPoT FM© Some Rights Reserved 2006 - 2007
Concept and Design by mmhan™
This site is not meant for any commercial purpose.